मान्छेहरूको जिद्दीपनका कारण कोरोना कहरलाई बल्झाउँदै ! « Naya Page
मान्छेहरूको जिद्दीपनका कारण कोरोना कहरलाई बल्झाउँदै !
भैरहवा, १३ चैत । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले दैनिक सार्वजनिक आह्वान गर्दै घरभित्रै बस्न जनतालाई बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। उनले लकडाउनको उल्लघङ्न नगर्न बारम्बार अनुरोध पनि गरेका छन् ।
उनले बुधबार अपील गर्दै लेखे, “शहरी आवास क्षेत्रका टोल विकास संस्थाले स्थानीय सुरक्षा निकायको सहयोगमा आफ्नो टोलभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई आउनबाट रोकौँ । टोलका बासिन्दाहरू पनि बाहिर नजाऊँ । खाद्यान्न र तरकारीको व्यवस्था टोलकै पसलहरूमा मिलाऔँ । कोरोना भाइरसबाट जोगिन सामाजिक र व्यक्तिगत दूरीलाई निरन्तर कायम राखौँ । अत्यावश्यक कामका लागि बाहिर जानु नै परेमा स्थानीय सुरक्षा निकायको अनुमति लिएर मात्र जाऔँ ।”
चौबिस घण्टामा १८ घन्टाभन्दा बढी कोरोनाको जोखिम र त्यसको पूर्वतयारी सम्बन्धमा योजना बनाउँदै स्थलगत अध्ययन अनुगमनमा हिँडिरहेका पोखरेल चिन्तित हुनु पनि स्वाभाविक हो । बाह्र जिल्ला रहेको प्रदेश नं ५ को बर्दिया, नेपालगञ्ज, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासी भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । भारतमा जनता कर्फ्यू लागेपछि सीमावर्ती शहरबजारमा त्यसको प्रभाव पर्नु स्वाभाविक भए पनि प्रदेशको पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा, रुकुममा भन्दा तराईका जिल्लामा मान्छेहरूको बलमिच्याईं र बढी ओहोरदोहोर गरिएको प्रशासनको ठम्याइ छ ।
एकातिर भारतसँग खुल्ला सीमा र अर्कोतिर शहर बजारका मान्छेहरूको जिद्दीपनले पनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनको आग्रहलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ । केही शहरीया मानिसले जिद्दी गरिरहेका छन् जसको दृष्टान्त बुधबार दिउँसो भैरहवामा देखियो ।
भैरहवाको मिलनचौकमा लकडाउनको अवेज्ञा गरेको भन्दै काममा खटिएका प्रहरीले केही साइकलचालकलाई सडकमै कारवाही गरेका छन् । शहर बजार जिद्दी मान्छेको क्रीडास्थल बन्न थालेको भन्दै नागरिक सचेतना फैलाउँदा फैलाउँदै पनि जिद्दी गर्नेहरूलाई कारवाही गर्नुको विकल्प नभएको शिक्षाशास्त्री रायमाझीले बताए ।
उनले भने, “सकेसम्म घरमै बस्ने, नसके एकाघरभन्दा यताउता नगर्ने भनेर यतिका प्रचारप्रसार गरिएको छ तर मान्छेहरू तरकारी किन्ने, बजार गर्ने भन्दै अन्य बन्द हड्तालको समयमा झैँ अटेर गरी हिँडिरहेका छन् । यो गलत हो ।” उहाँले यतिबेला आफूखुसी हिँड्ने मान्छेलाई कानूनी कारवाही गर्न कन्जुस्याईँ गरेम त्यसले विकराल रूप लिनसक्ने बताए ।
जिद्दी मान्छेकै कारण समाजमा सङ्कट निम्तिने समाजशास्त्रका जानकार थानेश्वर पाण्डेले तर्क गरे । उनले भने, “प्रहरीको आँखा छल्दै दौडधुप गर्ने र लुकिलुकी पसल खोल्ने यो अन्य बेलाको बन्द र निषेधाज्ञाको समय होइन, यतिबेलाको प्रसङ्ग फरक छ । यो महासङ्कटको समय हो ।” उनले मानिसले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको भन्दै त्यस्ता मान्छेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने बताए।
विश्वमा लकडाउनलाई उल्लघङ्न गर्दा इटालीले ठूलो क्षति ब्यहोरिरहेको छ । शुरुआतमा पाँच जनामा देखिएको कोभिड–१९ त्यहाँका नागरिकले वेवास्ता गरी हिँडडुल गर्दा आज इटाली तहसनहस जस्तै भएको छ ।
बेलायतका राजकुमारलाई समेत कोरोनाले छोएको खबर प्राप्त भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा २१ दिनको पूर्ण लकडाउन लगाइएको छ । कोरोनाको उद्गमस्थल चीनमा अनुशासनकै कारण भाइरस नियन्त्रणमा आएको हो । हाम्रो देशमा सरकारी निर्देशनको अवेज्ञा गर्दै गाउँमा भन्दा शहरमा मान्छेहरू लर्को बाँधेर किनमेल र घुमघामका लागि हिँडिरहनु गलत भएको नागरिक अगुवाहरूको तर्क छ ।
स्थानीय वडा सरकारको निगरानीमा टोलस्तरमा खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तु किनमेल गर्ने प्रबन्ध गरेमा पनि भीड नियन्त्रणमा सहज हुने नागरिक अगुवाको सुझाव छ । लकडाउनका कारण दिनभर सुनसान भएको भैरहवा बजार साँझपख भने मान्छेहरूको हुल देखिन्थ्यो । मान्छेहरू तरकारी बजार र किराना पसलमा भीड लागेका थिए ।
कयौँ युवा युवती साँझपख बजारमा टहलिरहेका थिए । उनीहरू रमाइलो मान्दै हिँडिरहेका पनि देखिन्थे । विगतका बन्द हड्तालको बेला साइकल, मोटरसाइकल, कार चलाउँदा बन्दको उल्लघङ्न गरेको भन्दै ‘हिम्मतवाला’, ‘ठूलो मान्छे’, ‘साहसी मान्छे’, भन्ने उपमा पाएकाहरू पनि यतिबेला सोही शैलीमा आफ्नो रवाफ देखाउँदा प्रहरीलाई सम्झाईबुझाई गर्न धौधौ भएको छ ।
रूपन्देही प्रहरीले सरकारी आदेशको अवज्ञा गरी सवारी चलाएको आरोपमा ११२ मोटरसाइकल, आठ स्कुटी, एक कार र सात साइकल नियन्त्रणमा लिएको रूपन्देही प्रहरी प्रवक्तासमेत रहनुभएका प्रहरी नायव उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्रीले बताए । उनले भने, ‘मान्छेहरूको जिद्दीपन देख्दा आश्चर्य नै लाग्छ । चौतर्फी प्रचारप्रसार गर्दा पनि अटेर गरिरहेका छन् ।”